काँग्रेस कैलालीको सचिवका आकांक्षी नृप सुनार : ‘नेतृत्व उभिएको ठाउँबाट उठ्छु’ - Morning Bell
काँग्रेस कैलालीको सचिवका आकांक्षी नृप सुनार : ‘नेतृत्व उभिएको ठाउँबाट उठ्छु’
Reporter	धनगढी	कात्तिक २२, २०७८
नेपाली काँग्रेसको १४ महाधिवेशन अन्तर्गत अझै देशका कैयौँ जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यतालगायतका विषयमा विवाद हुँदा केही जिल्लामा अधिवेशन रोकिएको छ । त्यसमध्ये कैलालीमा पनि अधिवेशन हुन बाँकी छ । अब छठ पर्वपछि अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि पार्टीको जिल्ला कार्य समितिले पूर्व तयारीका कामहरू गरिरहेको छ । अधिवेशन अन्तर्गत नेता कार्यकर्ताहरू पार्टीका विभिन्न पदमा उम्मेद्वार बन्न आकांक्षा व्यक्त गरिरहेका छन् । उम्मेद्वारी पनि घोषणा गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य नृप सुनारले पनि सचिवमा उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला सदस्य मात्रै नभई पार्टीका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर सफलतापूर्वक काम गरेका उनी आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन सक्रिय भएर लागिरहेका पनि छन् । पार्टीको अधिवेशनको मिति नजिकिँदैन गर्दा जिल्लामा हुन लागेको अधिवेशनको पूर्व तयारी र सचिवमा उम्मेद्वार बन्नुपर्ने आधारहरूलगायतका विषयमा प्रचार–प्रसार समितिका संयोजकसमेत रहेका काँग्रेस कैलालीका सदस्य सुनारसंग मर्निङ बेल दैनिकका कार्यकारी सम्पादक अंकुश कुँवरले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कैलालीमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न कस्तो तयारी भइरहेको छ ?
नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया साउन महिनादेखि नै सुरु भएको हो । केही कारणवश विलम्ब भएको मात्रै हो । पार्टीमा समायोजन भएका दलहरू र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा केही ढिलाइ भएको हो । क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची प्रकाशित भइसकेपछि नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको गत असोजमा बसेको बैठकले अधिवेशन सम्पन्न गर्ने योजना अनुरूप जिल्ला सभापति नरनारायण शाह ‘मनु’को संयोजकत्वमा १५०१ सदस्यीय अधिवेशन आयोजक मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौँ । त्यस अन्तर्गत ११ वटा उपसमिति गठन गरिएका छन् । आर्थिक समिति, मञ्च व्यवस्थापन समिति, प्रचार प्रसार समिति, अतिथि सत्कार समिति, निर्वाचन व्यवस्थापन समिति, बुथ व्यवस्थापन समितिलगायत समिति गठन गरेर जिल्लाभरिमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । २७ गते अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ ।
जिल्लाका सबै तहका गरी १२६ वटै वडाका सभापतिहरू, क्रियाशील साथीहरू अधिवेशन सम्पन्न गर्ने अभियानमा लागिसकेका छन् । वडा अधिवेशनका लागि निर्वाचन अधिकृत छनौटको कार्य भइरहेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन अधिकृत आइसकेपछि निर्वाचन अधिवेशन छनौट गर्ने काम पनि सकिनेछ । अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि करिब सबै आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेका छौँ ।
जिल्लामा अधिवेशनको कार्य तालिका कस्तो छ ?
जिल्लामा यही कार्त्तितक २७ गते वडा अधिवेशन, ३० गते पालिका अधिवेशन, मङ्सिर ३ गते सङ्घीय प्रदेश अधिवेशन, ६ गते सङ्घीय क्षेत्रीय अधिवेशन र १० गते जिल्ला अधिवेशन हुन्छ ।
तपाई पनि पार्टीको कुनै पदमा उम्मेद्वारी दिने योजनामा हुनुहुन्छ ?
मैले नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिमा २०७३ सालमा सदस्यमा निर्वाचित भएँ । पार्टीले केही समयपछि विभिन्न जिम्मेवारी दियो । म केवल सदस्यमा मात्रै रहेनँ । प्रशिक्षण शाखाको प्रमुखको रूपमा मलाई जिम्मेवारी दिइयो । पार्टीले विभिन्न समयमा गरेका विभिन्न अभियानहरू, आन्दोलनहरूमा सरिक भएँ । सँगै जिल्ला प्रशासन क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पनि मैले पाएँ । जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहको घोषणा पत्र बनाउने तयारी समितिको संयोजक, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कामहरू, भूमिका, पार्टीसँगको समन्वय हेर्ने भूमिकामा पनि मलाई जिम्मेवारी दिइयो । जसको अगुवाइ पार्टी सभापति शाहले गर्नुभयो । पछिल्लो चरणमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यताको जिम्मा जसरी पाएँ । आम काँग्रेसहरूको सामीप्य जसरी बढेको छ, त्यसले म यो निर्वाचनमा आफूलाई उभ्याउँछु भन्ने लागेको छ । तर चुनौती थुप्रै छन् । अहिलेसम्म गरेको कामले म पार्टीको सचिवमा उपयुक्त हुन्छु भन्ने विश्वास छ । सचिवका लागि उम्मेद्वारी तयारी गरेको छु । सबैको साथ पाउँछु भन्ने आशा छ ।
कुन प्यानलबाट अधिवेशन लड्नु हुन्छ ?
कैलाली ठूलो जिल्ला हो । २५०० भन्दा बढी मतदाता छन् । यहाँ स्वतन्त्र लड्ने सम्भावना छैन । अहिलेको नेतृत्वसँगै बसेर पाँच वर्ष काम गरेँ । नरनारायण शाह मनुले जसरी नेतृत्व गर्नुभयो त्यो नेतृत्वको हिसाबले उहाँको जहाँ सामिप्यता रहन्छ, त्यहीँबाट म आफ्नो उम्मेद्वारी दिन्छु । उहाँले म कुनै न कुनै ठाउँमा म उभिन्छु भन्नुभएको छ । उहाँ जुन टिममा उभिनु हुन्छ त्यही ठाउँमा म पनि उभिन्छु । सचिवले टिम बनाउने पनि होइन ।
सभापति शाहको समर्थन रहने टिममा सचिवका अन्य आकांक्षीहरू पनि होलान् नि ?
हो, सचिव पदमा उम्मेद्वारी दिने जति पनि आकांक्षी छन्, प्रायः सबै उहाँकै टिमकै देखिएका छन् । कोही भन्दा कोही कम देखिएका छैनन् । सबै क्षमतावान छन् । हामी सबै समान हैसियत र समान ढङ्गका छौँ । त्यसमध्ये पनि नेतृत्वले उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तिलाई राख्नुहुन्छ । त्यो ठाउँमा म उपयुक्त छु । मसँगै आकांक्षी रहेका साथीहरूलाई त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
पार्टी सभापति शाहबाट साथ पाउँछु भन्ने आशा छ ?
यो पाँच वर्षको समयमा जसरी मैले उहाँसँग काम गर्ने अवसर पाएँ, उहाँ कामलाई महत्त्व दिनुहुन्छ । व्यवस्थापकीय कुरा चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ, सङ्गठन भनेको खाली लहड मात्रै होइन व्यवस्थापन, भिजन, नवीनतम ऊर्जा पनि हो । त्यही कुरामा उहाँ विश्वास गर्नु हुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यो ऊर्जा मसँग छ । त्यही कारणले सभापतिले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईँलाई सचिवमै जिताउनुपर्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ के–के हुन् ?
म जिल्लाका १२६ वटै वडामा कम्तीमा तीन पटकसम्म पुगेको छु । चाहे त्यो प्रशिक्षणका माध्यमले होस्, चाहे भ्रष्टाचार अनुगमन समितिमार्फत होस्, चाहे वडामा पार्टीले गर्ने वार्षिक सम्मेलन, निर्वाचन घोषणा पत्र तयार गर्ने बेला होस् वा पार्टीका अन्य गतिविधि गर्ने बेला प्रत्येक वडामा पुगेको छु । मलाई सबै काँग्रेसीहरूले राम्रोसँग चिनेका छन् । मेरो क्षमता, विचार, व्यवहार, बानी, गर्न सक्ने योगदानका बारेमा उहाँहरू जानकार छन् । जसका कारणले उहाँहरूले मलाई पार्टीको सचिवमा ल्याउनुहुन्छ । मेरा यी आधारभूत आधारहरू हुन् । म विगतमा कैलाली जिल्लाका नेविसंघको अध्यक्ष भएँ । केन्द्रीय सदस्य भएँ । तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य भएँ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको सभापतिको उम्मेद्वार पनि भएँ । तर त्यो निर्वाचन हुन सकेन । त्यो बेलाका पनि मेरा थुप्रै साथीहरू पार्टीमा छन् । अहिलेको जिल्ला समितिमा पाँच वर्षको समयमा हुँदा पनि सबैसँगको सामिप्यता पनि सचिवमा आउने मेरा आधारहरू हुन् । यसले मलाई सचिवमा आउन सहज छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
अहिले काँग्रेसमा युवाहरूको आकर्षण बढेको छ, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न के योजना बनाउनुहुन्छ ?
अहिले कैलालीमा हामी युवा साथीहरू जिल्ला कार्यसमितिमा भएकाले हामीले २५ प्रतिशत युवाहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिनु भनेर लिखित रूपमै हरेक क्षेत्र, प्रदेश र वडालाई भन्यौँ । संयोगले ४० प्रतिशत युवाहरू आए । यो युवाको आकर्षण काँग्रेसका लागि ऊर्जा हो । यदि यो ऊर्जामा म जिल्ला कार्यसमितिमा भएँ वा हामीले भनेको सभापति जिल्ला कार्यसमितिमा आयो भने हामी युवा साथीहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्छौँ र उहाँहरूलाई पार्टीको निरन्तर काममा खटाउँछौँ । उनीहरूको भरोसाले मात्रै यो पार्टी निर्माण हुनसक्छ । अहिले हामीसँग तीन तहको पुस्ता छ । माथिल्लो पुस्ताको अनुभवको सम्मान गर्दै ग्रहण पनि गर्ने र युवाहरूको नवीनतम सोचलाई मिश्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैले स्थापित हुनुपर्छ । हरेकलाई पार्टी र पार्टीका हरेक भातृ सङ्गठनमा व्यवस्थापन गर्छौँ । जहाँ जसको बढी भूमिका रहन्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने योजना अगाडि सार्छौ ।
काँग्रेसमा गुट उपगुटहरू पनि देखिन्छन्, त्यसलाई मिलाउन वा एकताबद्ध बनाउन तपाई भूमिका के रहन्छ ?
गुट उपगुट भनेको निर्वाचनताका विभिन्न मानिसहरूले आफ्नो मन पर्ने साथीहरूका बिचमा एक ढङ्गको छलफल वा संवाद गर्ने समूह हुन् । यसलाई काँग्रेसको यो अधिवेशनले यी कुरालाई अत्यन्तै न्यूनीकरण गर्छ । अधिवेशनबाट पराजित हुने वा दोस्रो÷तेस्रो हुने साथीहरूबिच पनि निर्वाचनपछि आपसी समझदारी हुनुपर्छ । पछि आउने तीनवटै तहको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने वातावरण हुनुपर्छ । धेरै हदसम्म गुट उपगुट हुँदैनन् । भएपनि समझदारीमा अगाडि बढ्ने वातावरण हामी बनाउनुपर्छ । त्यसमा मेरो समन्वयकारी भूमिका हुन्छ ।
तपाई प्रचार–प्रसार समितिको सचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यो काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
प्रचार–प्रसार समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाइसकेपछि मैले मात्रै यो काम गर्न सक्दैन । त्यसका लागि थुप्रै साथीहरूलाई राख्ने कार्य प्रारम्भ ग¥यौँ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो निर्वाचन क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरेका छौँ । त्यसै गरी प्रेस युनियनले पनि केही नाम दिएको छ । विशेष गरेर युनियनमा आबद्ध वा शुभेच्छुक पत्रकाहरुलाई समितिमा मनोनयन गरेका छौँ । अझै मनोनयन गर्ने काम भइरहेको पनि छ । काँग्रेसको प्रचार गर्न सक्ने कोही पनि नछुटोस् भनेर लागिरहेका छौँ । काँग्रेसको आधिकारिक फेसबुक पनि बनाएका छौँ । ग्रुप पनि हामीले बनाएका छौँ । अन्य प्रचार प्रसार सामग्री पनि बनाएका छौँ । त्यो क्रम जारी छ । काँग्रेस महाधिवेशनलाई एक पर्वका रूपमा सम्पन्न गर्न प्रचारात्मक अभियान चलाइरहेका छौँ ।
२२ कात्तिक २०७८, सोमवार १७:०६ बजे प्रकाशित
अहिलेको एमाले एकीकरणसहतिको नयाँ एमाले हो – इन्चार्ज भट्ट
बैतडीमा भिरबाट लडेर महिलाको मृत्यु